Ku -daridda kartida Aaladda Editing Platform oo ay ku dhawaaqday Prime Medicine
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ku -daridda kartida Aaladda Editing Platform oo ay ku dhawaaqday Prime Medicine
Prime Medicine, Inc., oo ah shirkad loo aasaasay inay ka dhabeyso ballan qaadkii Prime Editing, ayaa maanta ku dhawaaqday ku darista awoodaheeda madal iyada oo ku saleysan cilmi baaris cilmiyeed dhowaan la sameeyay.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno horumar soo baxaya oo sii kordhin doona suuragalnimada Ra'iisul -wasaaraha sidii hab -daweyn," ayuu yiri Keith Gottesdiener, MD, oo ah Madaxa Daawada Prime. “Horumarkaan, oo ka sarreeya tiknolojiyadda aasaasiga ah ee aasaasiga ah, waxay u badan tahay inay kordhiso wax -ku -oolnimada Prime Editing, waxayna ballaarin doontaa aagagga laga yaabo inay Editing Prime ka shaqeyso, oo laga yaabo inay gaarsiiso gaarsiinteena cuduro dheeraad ah oo aan weli hab tafatir hidde ah weli awoodin si wax looga qabto. ”
Horumarkaan cusub ee ay sameeyeen saynisyahannada dibedda, iyo dadaallada joogtada ah ee Prime Medicine ee kooxda horumarinta gudaha, shirkaddu waxay filaysaa inay sii wanaajiso is -beddelka, saxnaanta, iyo hufnaanta Prime Editing. Awoodda lagu sharraxay waraaqihii ugu dambeeyay ee cilmiga teknolojiyadda Dabeecadda iyo Unugga ayaa awood u siin kara horumarinta daaweyn aad u waxtar badan iyada oo loo marayo waxqabadka tafatirka hidda -socodka oo la hagaajiyay.
Hal horumar ayaa ku lug leh hagaha hagaajinta Prime Prime RNA (pegRNA). Prime Editing wuxuu adeegsadaa molecule pegRNA si uu u helo bartilmaameedka hidda iyo inuu hagaajiyo hagaajinta la rabo ama wax laga beddelo. Warqad lagu daabacay Nature Biotechnology Oktoobar 4, 2021, qoraayo uu horkacayo David R. Liu, oo ka mid ah aasaasayaashii Prime Medicine, waxay muujiyeen in pegRNA-yada la farsameeyay (epegRNAs) ay hagaajin karaan hufnaanta habka tafatirka dhowr-laab.
Shirkadda ayaa sidoo kale raadinaysa istiraatiijiyado dhowaan lagu sifeeyay hagaajinta hufnaanta iyadoo la hagaajinayo waddo dayactir DNA oo gaar ah. Warqad lagu daabacay Cell Oktoobar 14, 2021, qoraayo ay hoggaaminayeen Liu iyo Britt Adamson waxay aqoonsadeen waddo dayactir DNA oo gaar ah, oo loo yaqaanno dariiqa dayactirka ee aan habboonayn, taas oo si xoog leh u wanaajisa hufnaanta tafatirka guud. Waxay muujiyeen in hawsha tafatirka la kordhin karo dhowr laab, iyo alaabta aan loo baahnayn ayaa la dhimi karaa dhowr laab, iyada oo la hagaajinayo waddada dayactirka aan habboonayn iyada oo loo marayo dhowr waji.
Prime Medicine waxay leedahay xuquuq ganacsi oo ka socota Machadka Broad ee MIT iyo Harvard si ay ugu adeegsato Prime Editing ujeedooyinka daweynta aadanaha, halka saynisyahannada iyo shirkadaha adduunka ay sii wadaan inay u adeegsadaan Prime Editing ujeeddooyin cilmi baaris iyo codsiyo kale.